VaChombo Nedzimwe Nhengo dzeZanu PF Vomiswa Pamberi peDare
Va Ignatius Chombo
Dzimwe nhengo dzebato reZanu PF dzinofungidzirwa kuti dziri kuchikwata che G40 dzakasungwa svondo rapfuura apo mauto aigadzirisa zvainetsa mubato reZanu PF dzapinda mudare redzimhosva nhasi dzichipomerwa mhosva dzakasiyanasiyana.
VaInnocent Hamandishe, vanona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF, avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto, vanzi vadzoke kudare zvekare musi wa8 Zvita.
VaHamandishe vachatongwa vachibva ku remand. Gweta raVaHamandishe, VaEmmanuel Samundombe vaudza dare kuti VaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyaya vari muhusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba.
Asi muchuchusi VaEdmore Nyazamba vati VaHamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo.
VaSamundombe vati zviri pachena kuti VaHamandishe vakasungwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva.
Mutongi VaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti VaHamandishe vatongwe vachibva ku remand sezvo VaHamandishe vatadza kupa humbowo hunoratidza kuti vange vari muhusungwa kubva svondo rapfuura.
Muneimwewo nyaya, vaimbove munyori wevechidiki muZanu PF, VaKudzanai Chipanga vari mudare pari zvino umo vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorrowdale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK 47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vanochengetedzwa.
VaChipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto Gen Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti hupenyu hwavo hwave mutsekekwende.
Vaudzawo dare kuti VaSaviour Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti VaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba KwaVaJonathan Moyo nekwavo kwainge kwaridzwa pfuti.
Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here, VaChipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba ye mapurisa.
Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaipisisa paBorrowdale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa mumotokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vange vari kubva musi iwoyo kusvika kuswera nezuro apo vakazonosiiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa.
Vati vaigara vachirohwa nekupihwa chikafu vachi bvunzurudzwa kuti sei vakatuka mukuru wemauto nemauto acho.
Muchuchusi VaEdmore Nyazamba vari kuti nyaya yaVaChipanga inzikwe musi wa8 Zvita vachibva kutirongo.
VaChipanga vari kuramba izvi vachiti vakagara nguva yakareba muhusungwa. Prof Lovemore Madhuku ndivo vari kumirira VaChipanga.
Gurukota rezvemari, VaIgnatius Chombo, avo vari kumirirwawo naProfessor Madhuku, vari mudare pari zvino umo vari kupawo divi renyaya yavo.